Tag: ရုံး Martech Zone
အကယ်၍ သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ပို့ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက်ထောင်နှင့်ချီသောအီးမေးလ်များကိုပို့ပါကအင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်သင်၏အီးမေးလ်များအားလုံးကို junk folder ထဲသို့လမ်းကြောင်းလွဲစေသည့်သိသာထင်ရှားသည့်ပြissuesနာအချို့ကိုသင်ကြုံတွေ့နိုင်သည်။ ESPs များသည်မကြာခဏဆိုသလိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပြီး ၄ င်းတို့၏ပို့ဆောင်နှုန်းမြင့်မားမှုအကြောင်းပြောဆိုလေ့ရှိသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်၎င်းသည်အီးမေးလ်ကိုအမှိုက်ပုံးအတွင်းသို့ပို့ခြင်းလည်းပါဝင်သည်။ သင်၏ Inbox ပို့ဆောင်နိုင်မှုကိုအမှန်တကယ်မြင်နိုင်ရန်အတွက်သင်ကဲ့သို့သော third-party platform တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်လိုသည်
ကော်ပိုရိတ်လောက၏အများစုမှာ၎င်းတို့၏ Office အကြောင်းအရာများကို Microsoft Office ပလက်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဖြန့်ကျက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများ၏ဗားရှင်းထိန်းချုပ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်လိုပါကကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက်ကိရိယာတစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဗားရှင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်စာရွက်စာတမ်းသိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်းမရှိပဲမဖြစ်နိုင်ပါ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီများ - အထူးသဖြင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများဖြင့် - ဤအကြောင်းအရာ၏တစ်တန်ကိုသမားရိုးကျ desktop application များ၌ထုတ်လုပ်သည်။ နှင့် operating system ကိုရှာဖွေအမြဲတမ်းအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး
တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 19, 2010 စနေနေ့၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၅ Douglas Karr
ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအချိန်ပြည့်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာထိမိလဲစရာအနည်းငယ်နဲ့စိတ်ကူးယဉ်ခရီးတစ်ခုပါ။ ငယ်ရွယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အချက်သုံးချက်ကိုပြီးမြောက်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။ အချိန်ပိုနှင့်ဘတ်ဂျက်အောက်တွင်အလွန်အကျွံဖြည့်ဆည်းခြင်း၊ ဒါကကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့တစ်ခုပါ အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့်အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုလျှော့တွက်ခြင်းသည်ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်၊
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 19, 2006 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 20, 2018 Douglas Karr
ExactTarget အလုပ်လုပ်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောနေရာပါ! ဒီနေ့မနက်မှာကျွန်မရဲ့နေ့လည်စာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ / လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ / လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကအလှဆင်ထားသောသီးတောင့်ဖြင့်ငါ့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်။ မွေးကင်းစကလေးငယ်များ confetti (ကျွန်ုပ်၏ကီးဘုတ်တွင်မည်သည့်အရာကိုမှမရယူရန်သတိပြုပါ)၊ Happy Birthday ဖဲကြိုး၊ Expresso စက် (!!!)၊ ဒေါက်တာ Grip Gel Fine Point ဘောပင်၊ Expo Dry Erase Marker နှင့်အစွန်အဖျားရှိသံလိုက်ကွင်းခတ်။ ခဲဖျက်များနှင့်လည်းကောင်း၊ “ Tide To Go” အစွန်းအထင်းဖယ်ရှားရေး (ကျွန်ုပ်သည်နေ့လည်စာမှတစ်စုံတစ်ရာသောအစာနှင့်အတူပြန်လာစဉ်ကတည်းက)